आज विश्व औंलो दिवसः काम ज्वरो आउनु औंलो रोगको मुख्य लक्षण, कसरी बच्ने ? – Green Ilam
इलाम, १३ वैशाखः आज विश्व औंलो दिवस हो । विश्व कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट लकडाउनमा नभएको भए यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाईने थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००८ देखि २५ अप्रिलका दिन ‘विश्व औंलो दिवस’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग औलो अथवा मलेरिया मानिस तथा जनवारमा प्लाज्मोडियम समूहका प्रोटोजोआ परजिवीका कारण लाग्ने गर्दछ । लामखुट्टेले टोकेर परजिवी शरीरमा प्रवेश गर्यो भने त्यसको १० देखि १५ दिनमा यसको लक्षणहरू देखिन सुरु हुन्छ । प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स, प्लाज्मोडियम ओभल र प्लाज्मोडियम मलेरिआईले साधारणतया मन्द खालको औंलोको संक्रमण गराउँछन् । त्यस्तै, अर्को प्रजाति प्लाज्मोडियम नोलेसीले मानिसमा रोगको संक्रमण बिरलै गराउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा औंलोको उच्च जोखिम भएका १२ जिल्लाका मानिस औलोको जाखिममा रहेका छन् ।
औंलो रोगका लक्षण
औलो रोगका परजिवी भएको लामखुट्टेले टोेकेपछि १० देखि १५ दिनभित्रमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वान्ता हुने, जोर्नीहरु दुख्ने, असजिलो महसुस हुनेजस्ता सामान्य लक्षण देखा पर्छन् । निरन्तर वा दिन बिराएर ज्वरो आउने, शरीरका भित्री अंगहरु फियो, कलेजो सुन्निने, रगतको मात्रा कमी हुने तथा परजिवीको प्रकृति अनुसार विभिन्न लक्षण देखिने हुन्छ । यो रोगले गम्भीर रूप लिएमा मानिसको मृत्यु समेत हुने सम्भावना हुन्छ । नेपाली कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँ जाने गर्छन् । विशेषगरी औंलोको जोखिम बढी भएको भारतबाट काम गरेर फर्किनेहरुले औंलो लिएर आउने गर्छन् । अफ्रिकन मुलुकहरुमा पनि औंलोको जोखिम बढी छ, त्यहाँबाट आएका मानिसमा पनि औंलोको जोखिम हुन्छ ।
औलोबाट कसरी बच्ने ?
औलोको जोखिम कम गर्न झुल तथा लामखुट्टे भगाउने रसायनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । लामखुट्टेको टोकाइ कम गर्ने वा लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि कीटनाशक औषधि छर्कने तथा घर वरपर पानी जमेका खाल्टाखुल्टी पुर्ने गर्नुपर्छ । राति सुत्दा सधैँ झुल प्रयोग गर्नु औलोबाट बच्ने प्रमुख उपाय हो । शरीरका खुला अंगमा लामखुट्टेबाट बच्न सकिने मलम प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्प्रे, लिक्वड, म्याट जस्ता लामखुट्टे भगाउने औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जोखिम युक्त ठाउँहरुको भ्रमणमा जानुअघि रोकथामका उपाय तथा औषधिहरु प्रयोग गर्ने गरेमा औलो रोग हुनबाट जोगिन सकिन्छ । घर–घर तथा समुदायमा औलो सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, औलो रोगका लक्षणबारे जानकारी दिने, शंकास्पद बिरामीले तुरुन्त परीक्षण गर्ने गरेमा औलो रोगबाट बच्न तथा अरुलाई बचाउन सकिन्छ ।
औंलोबारे महत्वपुर्ण सन्देशः
– औलो एनोफिलिज जातको संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ ।
– काम ज्वरो आउनु औलो रोगको मुख्य लक्षण हो ।
– स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा औलो रोगको जाँच तथा उपचार निःशुल्क हुन्छ ।
– परिवार तथा छरछिमेकमा कसैलाई औलोको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गराउनुपर्छ ।
– लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै औलो रोकथामको सर्वोत्तम उपाय हो, त्यसैले सुत्दा झुलभित्र सुत्नुपर्छ ।
– घर, गाउँ र समुदाय सफा राखी लामखुट्टेले फुल पार्ने स्थानलाई नष्ट गर्नुपर्छ ।
Tags: आज विश्व औंलो दिवसः काम ज्वरो आउनु औंलो रोगको मुख्य लक्षणकसरी बच्ने ?